चीनबाट नागरिक ल्याउन आलटाल गर्दै सरकार - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
डोल्पामा होम क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका पुरुषमा कोरोना पुष्टि
भोलिदेखि मौसममा सुधार हुँदै जाने
सप्तरीमा थप ७ जनामा कोरोना संक्रमण, १५ जना कोरना मुक्त
बाजुराको क्वारेन्टाइनमा ६५ वर्षीय वृद्धको मृत्यु
वडाध्यक्ष घुससहित पक्राउ
चीनबाट नागरिक ल्याउन आलटाल गर्दै सरकार
कोरोनाको महामारीका कारण चीनको वुहानलगायत सहरमा रहेका नेपाली विद्यार्थी खानसमेत नपाई कोठाभित्रै बस्नुपरेको पीडा सुनाइरहेका छन् ।
तिनका अभिभावक सिंहदरबार धाउँदै स्वदेश फर्काइदिन याचना गरिरहेका छन् । तर, नागरिकको पीडामा सरकार ढुक्कसाथ आलटाल गरिरहेको छ ।
क्वारेन्टाइन टुंग्याउन ६ दिन लगाएको सरकारले अरू तीन दिन बितिसक्दा पनि नागरिक ल्याउने मिति निश्चित गरेको छैन । शनिबार त त्यसबारे कुनै छलफलसम्म भएन । ‘चीनबाट नागरिक ल्याउने विषयमा शनिबार कुनै छलफल भएन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले भने ।
सरकारले शुरुमा उनीहरू चीनमै सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । तर, भारत, अमेरिकालगायत देशले नागरिक फिर्ता लगेपछि सरकार दबाबमा परेको थियो ।
१८ माघमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना नागरिक फर्काउन सहजीकरणका लागि चीन सरकारलाई औपचारिक पत्र पठायो । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल आउन चाहनेलाई फारम भर्न भन्यो । १८५ जनाले फर्किन चाहेको भन्दै फारम पनि भरे ।
प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले २० माघमै पत्रकार सम्मेलन गरेर वुहानलगायत सहरबाट २४ माघभित्रै नागरिक फिर्ता ल्याउने बताएका थिए । तर, सरकार उनीहरूलाई फर्काएपछि १४ दिनसम्म राख्नुपर्ने ठाउँ खोज्ने नाममा अलमलियो ।
चीनले कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न १० दिनमा हजार शड्ढयाको अस्पताल ठड्याउँदा नेपालले जम्मा १८५ नागरिक ल्याएर राख्ने ठाउँ खोज्न ६ दिन लगायो । उनीहरूलाई इचंगुनारायणको सुकुमबासी आवास भवन, खरिपाटीको विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्र, शिवपुरी र सूर्यविनायकका सैनिक ब्यारेकमा राख्ने बिहीबार मात्रै टुंग्यायो ।
ठाउँ टुंगिएपछि अब छिटै फिर्ता प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षा थियो । तर, सरकारले फेरि आलटाल गरेको छ । आवश्यक व्यवस्थापनले गति लिएको छैन । शनिबार खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरणले दुई भवन खाली गरेको छ ।
वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग र हेस्टेलको भवन खाली गरिएको खरिपाटी विद्युत् प्राधिकरणका सहनिर्देशक केशवराज ओलीले बताए ।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको जनाएको छ । सहसचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहका अनुसार स्वास्थ्य टोली चीन जानुअघि स्वास्थ्य जाँच, पोसाक व्यवस्थापन, चीनबाट नागरिक ल्याइसकेपछि विमानस्थलमा परीक्षण र क्वारेन्टाइनको अवधिमा स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई दिइएको छ ।
चीनबाट ल्याइनेको रगत तथा अन्य नमुना परीक्षणको जिम्मेवारी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दिइएको छ । चीनबाट ल्याइएको व्यक्तिमा संक्रमण देखिए आवश्यक उपचार र समन्वय गर्न सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताललाई दिइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिक
काठमाडौं । रोना भाइरस संक्रमणबाट थप दुई जनाको मृत्...
काठमाडौं । डोल्पामा होम क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका...
आइतबारदेखि देशभर मौसममा क्रमिक सुधार हुने भएको छ ।...
सप्तरी । सप्तरीको बालन विहुल गाउँपालिकाका ७ जनामा ...
बाजुरामा आइसोलेसनमा भर्ना भएकी दुई वर्षीया बालिकाको मृत्यु
फायल तस्विर काठमाडौं ।जिल्ला अस्पताल बाजुरामा आइसुलेसनमा भर्ना भएकी दुई वर्षीया...